Q के मलाई कमलपित्त वा जण्डिस लागेको बेलामा धुम्रपान गर्न सक्छु ।
जण्डिस र धूम्रपानको बीचमा कुनै सह-सम्बन्ध रहेको छैन । तथापि तपाईंलाई सामान्य स्वास्थ्य कारणहरूले गर्दा जण्डिसबाट निको हुदाँसम्म धूम्रपान नगर्न सल्लाह दिइन्छ ।
Q म घुँडा दुख्ने समस्याबाट पिडित छु ? के गर्नुपर्छ होला ?
घुँडाको दुखाईको धेरै कारणहरू हुन्छ जस्तै कुनै चोटपटक, मानसिक आघात, जोड्नी सुन्निएर दुख्ने रोग वा अर्थिरिस, कुनै पनि मांसपेशी वा हड्डी जोड्ने तन्तु (लिगामेन्ट) च्यातिने, उमेरको कारक, मोटोपना, क्याल्सियमको कमी आदि जस्ता कारणहरू छन् । यसको कारण पत्ता लगाउनको लागि, चिकित्सकसँग परामर्श लिन सल्लाह दिइन्छ किनभने यसको लागि शारीरिक परिक्षणको आवश्यकता पर्दछ । यदि यो असहनीय छ भने, तपाईंले चिकित्सकद्वारा निर्धारित केही औषधिहरु लिनुपर्छ । यसको साथमा, केही रोकथाम गर्ने उपायहरू राहत पाउनका लागि अपनाउनु पर्दछ - पूर्ण आराम लिनुहोस् र चोट लागेको वा घाउ भएको ठाउँको सुरक्षा गर्नुहोस् । जब आराम गर्दा, तपाईंको घुँडामुनि एउटा सानो तकिया (सिरानी) राख्नुहोस् । तपाईं १० देखि २० मिनेटको लागि बरफ वा चिसो प्याक, एक दिनमा ३ वा बढी पटक राख्न सक्नुहुन्छ । सम्भवभएसम्म सबैभन्दा कम हिलको लगाउनुहोस्, किनभने यसले हिडेंको बेलामा घुँडामा दबाब दिन सक्छ । स्वस्थ तौल कायम राख्नुहोस्; यो तपाईंले घुँडाको लागि गर्न सक्ने सबैभन्दा राम्रो चीजहरूमध्ये एक हो । यदि दुखाइ धेरै गम्भीर छ भने तपाईंलाई कारण र लक्षणहरूमा निर्भर भएर सर्जिकल शल्यचिकित्सासम्बन्धी हस्तक्षेप गर्न आवश्यक पर्दछ ।
Q म एण्टीबायोटिक्सको परिणामको रूपमा उच्च-अम्लियता वा हाईपर- एसिडिटीबाट पीडित भएको छु । कृपया सल्लाह दिनुहोस् ।
उच्चर-अम्लियता सबैभन्दा धेरै एण्टीबायोटिक्सको सामान्य साईड इफेक्ट हो । धेरै चिकित्सकहरुले यो साईड- इफेक्टलाई हटाउन एण्टीबायोटिक्ससँग एण्टासिड वा एच २ ब्लकर दिने गर्दछन् । यदि तपाईंको चिकित्सकले त्यस्तो गरेन भने, कृपया उहाँ भएको ठाउँमा जानुहोस् र उहाँलाई त्यस्तै दिनको लागि भन्नुहोस् । यदि तपाईं लामो समयको एण्टीबायोटिक्समा हुनुहुन्छ भने, विभिन्न खालका भिटामिनले मद्दत गर्नेछ । घरमा नै हुने उपायको रूपमा, उच्च- अम्लितालाई ठीक पार्नको लागि तपाईंको आहारमा प्रशस्त मात्रामा दूध र दही समावेश गर्नुहोस् ।
Q उच्च लिम्फोसाइट्स भनेको के हो ।
लिम्फोसाइटको ध्यानमा हुने वृद्धि भनेको सामान्यतया: भाइरल संक्रमणको संकेत हो (केहि दुर्लभ अवस्थामा, लेकुमियाहरु अन्यथा सामान्य व्यक्तिमा असामान्य रूपमा उठाएको लिम्फोसाइट गणना मार्फत पाइन्छ)।
Q उच्च कोलेस्ट्रोलका लक्षणहरु
उच्च कोलेस्ट्रोल स्तर सामान्यतया मौन रहन्छ र धेरै वर्षको लागि कुनै लक्षणहरू उत्पन्न गर्दैन । तिनीहरू नियमित रूपमा गरिने रक्तचाप परीक्षणहरू जस्तै लिपिड प्रोफाईलद्वारा पत्ता लगाउन सकिन्छ वा तिनीहरूले हृदयको रोग र प्रहार वा स्ट्रोक जस्ता जटिलताहरु गर्न सक्दछ ।